၁၈ ဗီဒီယိုများ - ဗီဒီယိုစကားပြောကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း! နိုင်ငံအားလုံး၊နိုင်ငံခြားရေး၊လောကဓာတ်လုံးကို။
အင်တာနက်ရှည်လျားသည်၎င်း၏နှလုံးအပေါ်ထားဖွံ့ဖြိုးဆဲလူကောင်းနဲ့အခုအပစ်အနေနဲ့မြင်နိုင်သောအသက်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကိုအင်တာနက်ကွန်နက်၊အစားအစာ၊အဝတ်အထည်များ၊ကားများ၊အိမ်ခြံမြေ၊အပင်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအဝယ်အသက်ဝိညာဉ်။ လူလူ့အဖွဲ့အစည်း။ လောလောဆယ်အများအပြားဖြစ်နိုင်သောကြောင့်မလာဖို့ထိုကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးလုပ်ဖို့သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အိမ်ရှင်သန်မှုတစ်ပျော်စရာနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်နှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်ကြောက်ရွံ့မှုနှင့်စိတ်ခံစားမှု၊ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်ချက်တင်ကစားတဲ့အဖြစ်၊စကားပြောဖို့ဘယ်လိုဖြစ်ပါသည်ရှာတွေ့။ ဗီဒီယိုချက်တင်ကစားတဲ့အလုပ်လုပ်နိုင်အတွက်အလှူ:မကယ်မျက်နှာပြင်သို့မဟုတ်ကီးဘုတ်၊ဗီဒီယိုစကားပြောကျော်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်အလွန်အရေးကြီးသောအချက်။ ဤသည်အလွန်အရေးကြီးသည့်အခါသင်မှတ်မိပြောဆိုသည့်အခါသင်၏တည်ရှိမှုနှင့်ပတ်သက်တဲ့ဓာတ်ပုံသို့မဟုတ်အဓိကဓာတ်ပုံနှင့်မည်သို့အခြားပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကိုဖော်ပြဖြစ်တဲ့နေရာအမှား၏။ ဗီဒီယိုစကားပြောတဲ့နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်အသုံးပြုရန်ဖို့ချက်တင်နှင့်အတူဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်ကြီးမားသောအရေအတွက်ကိုစာချုပ်အပါအဝင်ကန် ပေါ်တယ်၊ဖုန်းနဲ့ဗီဒီယိုမှကျေးဇူးတင်စကား၊အသုံးပြုသူဖော်ရွေမွတ္ထားပုံစံ၊အသက်အရွယ်ဖြစ်ပါသည် ၁၈ အသက်အနှစ်။ သို့သော်အများစုမှာအခြေခံပညာအမှုအရာအတြက္ေတာ့အလှန်ဆက်သွယ်နှင့်အတူမိတ်ဖက်၊ဒါပေမယ့်ထည့်သွင်းမှု။ ထိခိုက်နေသော။ စကားပြောဝန်ထမ်းအလွန်ရိုးရှင်းတဲ့နှင့်အဆင်ပြေပင်မျက်နှာပြင်အရာကမှကောင်းစွာ-ဤသည်အရေးအပါဆုံးနှင့်အများဆုံးအရေးကြီးတဲ့အရာ။ မတူဘဲရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးအတွက်သာဗီဒီယိုချက်တင်၊လူအတော်များများဟာအပြောချင်ပြီးသူတို့အခ်င္းခ်င္းဆက္သြယ္ႏိုင္သည္၊လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောအကြောင်းအရာ၊အတတ်ပညာ၊နိုင်ငံရေး၊သဘာဝ၊ပြောင်းလဲနေတဲ့အတွေ့အကြုံ၊စကားပြောဆိုချက်၊အမြတ်အစွန်းမှခရီး။ ၏သင်တန်း၊ဒီအလုပ်မထုတ်ပယ်၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဆက်သွယ်ရေးနှင့်နောက်ဆုံးဖြစ်၏ရာခိုင်နှုန်းအိမ်ထောင်သည်စုံတွဲများကြသူတည်ခိုင်မာသောမိသားစုဆက်ဆံရေးနှင့်အွန်လိုင်း။
ပေါင်းထည့်လိုလျှင်အရာဝတ္ထုကိုအောက်တိုဘာလမှ၊ထိုသို့ဖြည့်စွက်၏မူရင်းအင်္ဂလိပ်ထူးပြုပြီးတော့အဆုံးသတ်။ ထို့အပြင်၊လူသိများ၏နေရာအရပ်အလိပ်၊အရပ် ၊အဆိုပါနေရာများမှာပုံစံဖျက်ဆီးခြင်းအားဖြင့်၎င်း၏အထူးပြု။အောက်တိုဘာလရဲ့။ ရုရှားတရုတ် အေျပာအဘိဓါန္ရှာဖွေဖို့ရန်ခွင့်ပြုသည်။ အ သင်္ကေတဖြင့်အစားထိုးအဖြတ်သင်္ကေတ။ ဥပမာအားဖြင့်၊နှစ်ဦးစလုံးအစုအဝေး။ ပေါင်းပစ္စည်းဖြည့်မူရင်း ကြိယာဒြက္မန္၊အောက်တိုဘာ။ ထို့အပြင်၊ဒါကြောင့်အတုအဆိပ်နေရာအကြားနေရာနှင့်နေရာ ထူးပြု။
ဤစာရင်းဇယားပြပွဲကြောင်းကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့အတွက်ပုံမှန်အခြေဖုံးရဲ့လော့စ်အိန်ဂျလိစ်နှင့်အတူကြိုဆိုနေ၊မအတွက်အလပ်သို့မဟုတ်။ ဒါပေမယ့်ယေဘုယျအားဖြင့်၊သာမိတ်ဆွေတွေကြဘူးသောသူမနှင့်အတူလူနှစ်ဦးသည်တူညီသောအတွေး။ ပေမယ့်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်လေ့၊ယဉ်ကျေးမှုအတားအဆီးတွေဖြစ်လာကြဖို့ပိုမိုခက်ခဲကျော်လွှား။ ယခု၏အစိတ်အပိုင်းကကြောက်မက်ဘွယ်သောအခါငါ့မိတ်ဆွေရဲ့မိဘတွေကမေးဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုစကားပြောတယ်။ အတူတူဖြစ်၊အကြောင်းမေ့လျော့ယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများနှင့်တူတစ်စုံတစ်ဦးကအခြားသူသို့မဟုတ်အခြားတိုင်းပြည်၊နှင့်အလှည့်တွင်ဆပ်ပြာပူဖောင်း။
ဒီတစ်ခု။ ႀကိဳဆိုပါသည္။ ပူပြင်းတဲ့နေ့ရက်၊အဆုံးမဲ့ကမ်းခြေ၊အကောင်းဆုံး ကော်ဖီ၊အကျော်ကြား ၏ဘောလုံးအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာ့ဖလားကျော်။ အဘယ်သူမျှမအံ့သြစရာဇီး သည်အစွဲနှင့်အတူမိမိကိုမိမိနှင့်အတူပေးသွင်းသူများ။ မှားယွင်းနေတာဘာမှမရှိဘူးရဲ့။ ဒီဖြစ်လာသည်တစ်အဖြစ်မှန်အတွက်ဘရာဇီး။ ပူးပေါင်းပြီး၊အကျွမ်းရဘရာဇီးအတွက်။ အနည်းဆုံးအချိန်၊သုညကုန်ကျစရိတ်အရုပ်၊ဒါပေမယ့်အဆင်ပြေဝန်ဆောင်မှုလက်လှမ်းသည့်အခါမှတ်ပုံတင်ရန်:ဒီနေရာတွင်ရလိမ့်မည်ကိုယ်ပိုင်ဆိုက်ကိုယ္ေ၊ဘလော့ဂ်သို့မဟုတ်ဓာတ်ပုံအယ်လ်ဘမ်ကို၊ေပးပိုမက်ဆေ့ခ်ျများ၊ဖော်ပြ။ သင်လည်းချိန်းတွေ့ကလပ်တွင်ပထမဦးဆုံးစာမျက်နှာ။
ပုံမှန်လှုံ့ဆော်မှုထောင်ပေါင်းများစွာ၏အမြင့် ၁၇၅ စင်တီမီတာ၊အလေးချိန် ၆၅ ကီလို၊အားကစား၊အဝတ်အသေချာမလွယ်ကူပုပည္အမျိုးသမီးများပွင့်လင်းတက်ကြွသောမိန်းကလေး။ ဒါဟာကောင်းသောအရာကိုဖြစ်လိမ့်မည်။ မှာမွေးဖွားကြီးပြင်းများ။ ငါကချစ်။ ငါ့အမြင့် ၁၆၂ စင်တီမီတာ၊အလေးချိန် ၅၅ ကီလိုဂရမ်။ ဆံထုံးတင်ဆောင်လာသောများအတွက်။ ငါ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစတိုင်အဝတ်ကိုဝတ်၏ပျှမ်းမျှဖြစ်ပါသည်၊ဦးမြင့် ၁၇၀ အခါ၊ကစားအားကစားဖိနပ်မပါဘဲ။ ဆီဥ၊ဧ၊စြက္ေဆးမ်ားကုတင် နှင့်သောက်၊သတိပြုရကြမည်မနှောင့်ယှက်အောင်၊တိတ်ဆိတ်တဲ့အဖော်မင်္ဂလာအစည်းအဝေးအသက်တာအတွက်အမျိုးသမီးအတွက်ရှာနေကြသူ
ရုရှားအစည်းအဝေးကျင်းပကြသည်အခါတိုင်းစနေနေ့တွင်အဓိကမြို့။ မင်္ဂလာပါ၊လာျ၊အမှတ်စိတ်ပညာနှင့်လက်မှတ်ရရှိထား။ ငါခဲ့တာငါ့စဉ်အတွင်းအလုပ်ထက်ပိုပြီးများအတွက် ၅ နှစ်ပေါင်း။ လျှင်သင်နားလည်ဖို့ကူညီတားဆီးဖြေရှင်းရန်စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်ပြည်တွင်းပဋိပက္ခများ။ နည်းလမ်းများကို။ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှအွန်လိုင်းအတိုင်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ သတင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များအတွက်အသက်ရှင်အက်စ်၊ခုထုတ်ကုန်လည်းအွန်လိုင်း- ရရှိနိုင်ပါသည်။ ဒီအတြက္လည္းအက်ဳံးအချိန်အခါအရေးယူခဲ့သည်။ သင်ဝယ်နိုင်သည့်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များမှာ ၂၀ လျှော့စျေး။ ခိုင်မာအားကောင်းအရိုး၊သင့်ကိုမဝယ်နိုင်သောသဘာဝအထုတ်ကုန်။ နှင့်အနီးအနာဂတ်ရှိလိမ့်မည်၊ကြောင်းဆေးဝါးများရရှိနိုင်လိမ့်မည်ဟုအားဖြင့်သို့ဖြစ်။ မျက်စိကျန်းမာရေး၊စိတ်မလွမ်းဖို့အခွင့်အလမ်းကောင်းတစ်ခုအမြတ်အစွန်း။
ဓါန္မွလွိဳက္လွဲစြာၾကိဳဒေးရဲ့အွန်လိုင်းလိင်ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာအားလုံးအမိတ်ဖက်အပေါ်ပထမဦးဆုံးနေ့က။ သွင်၊တောင်အထပ်များအတွက်အမှန်တကယ်စည်းအဝေးသို့မဟုတ်အင်တာနက်ချိတ်ဆက်အတွက်အဆိုပါမြို့။ အရွယ်ရောက်ချိန်းတွေ့တယ်။ ဒီတစ်ခုပျော်စရာပါပဲ၊ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အွန်လိုင်းပေါ်တယ်ဖြစ်ပါတယ်အများအတွက်သာရည်ရွယ်သည်။အရွယ်ရောက်ပရိသတ်ကို။ သင့်အောက်၌ရောက်နေတယ်ဆိုရင်အသက် ၁၈ နှစ်သို့မဟုတ်သင်သည်ငါတို့ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်။ သီးခြားအွန်လိုင်းကတိကဝတ်တယ်သုံး၊လက်ငင်းမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်လူမှုဝင်မည်အတွက်ရေရှည်ဆက်ဆံရေးချိန်းတွေ့ကွန်ယက်များအတွက်မိန်းကလေးများနှင့်ဇန်နဝါရီ ၁၈ အသက်အနှစ်။ ပေါ်တယ်ကြီးမားတဲ့ကမ္ဘာကြီး၏အတည်ပြုဒေတာဘေ့စအပါအဝင်၊ကိုယ္ေ။ ယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများ၊အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ၊စုံတွဲများအဘို့အစောင့်ဆိုင်းနေကြပါတယ်တစ်ကောင်၊မွတ်လိင်များအတွက်။
ကြောအမည်မသိစကားပြောခန်း၊ဒါကြောင့်အများကြီးပျော်စရာစကားပြောစကားပြောထောင်ပေါင်းများစွာ၏အဘို့ယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများနှင့်ပတ်သက်။ ဒါဟာဘာသာရေး။ -အသုံးပြုသူများကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်သင်၏မူလစာမျက်နှာစာမျက်နှာ။ လူတိုင်းအတွက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ဆွဲ။ ပြတ်သို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းအကြောင်းတားမြစ်ထားသည်အတွက်စက်ဝိုင်း၊လယ်ကွင်း၏အထက်ပါအချက်အလက်အပါအဝင်၊သင်၏အမည်ဝှက်နှင့်ယခုသင့်အကောင့်ကို။ လျှင်သင်ဤနည်းဥပဒေချိုးဖောက်၊မပြန်လာ၎င်း၏အဆင့်အတန်းကိုသင်သို့မဟုတ်တားမြစ်ပိတ်ပင်သင့်ရဲ့အကောင့်ကို။ မည်သည့်အကြောင်း၊ကြော်ငြာအကြံပေးချက်များ၊လင့်များပေးဆောင်န်ဆောင်မှုသို့မဟုတ်တတိယပါတီန်ဆောင်မှုများဖုန်းနံပါတ်များ၊ဖိတ်၊လက်ငင်းရစူလ်တမန်များ၊စသည်တို့ကို။ အမြဲတမ်းပိတ်ပင်တားမြစ်ကနေအလုပ်အကိုင်အားဖြင့်အပြစ်ဒဏ်၊အမ်း၊သို့မဟုတ်ထုတ်ဖော်သတင်းအချက်အလက်။
သူလူများစွာရှိပါတယ်၊ပင်သောသူတို့သည်ကြောက်လန့်ကြ၏ဖြစ်နိုင်ချေကိုငြင်းပယ်နေကြတယ်၊ခေါင်း၌ဤကိစ္စနှင့်ပတ်သက်။ ဘယ်အရာကိုပထမဦးဆုံးအဖျက်သည်တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်သပိတ်လဒ္ကစနစ်တကျတုန့်ပြန်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ၊ဆိုက်တစ်ခုရှိပါတယ်အလွန်ကြီးစွာသောနည်းလမ်း။ ကယ်မိန်းကလေးရဲ့ပရိုဖိုင်းနဲ့ချက်တင်။ ဒါကြောင့်၊ကျွန်တော်တို့နားလည်နိုင်ရဲ့လားဆိုတာကအကင်ဟင်းချိုဆက်ဆံရေးသို့မဟုတ်အနာ။
ဤသည်အဘ၏အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြေနိုင်အဆိုပါဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကွာရှင်းစတင်အလေးအနက်ဆက်ဆံရေးနှင့်အတူသူ၏မိခင်ယောက္ခမအတွက်အညွှန်းကိန်း။ ကျနော်တို့မျှော်ကြည့်ရှုဖို့အသင့်ပါဝင်ဇက်မှရုရှားစကားပြောအသုံးပြုသူများ။ ပို ရှာစစ်တမ်းများကနေအများ၏စာရင်းရွေးချယ်ခရိုင်အမျိုးသမီးရဲ့ဖခင်မိခင်ဥပဒေစတင်အလေးအနက်ဆက်ဆံရေးနှင့်အတူအညွှန်းကိန်းကိုကွာရှင်း။ ကျနော်တို့နှင့်အတူ ကျနော်တို့မျှော်ကြည့်ရှုဖို့အသင့်ပါဝင်ဇက်မှရုရှားစကားပြောအသုံးပြုသူများ။ စာရင်းအတွက်ရွေးချယ်ထားသည့်ဒေသများအတွက်သို့မဟုတ်အသေးစိတ်အချက်၊ကျွန်ုပ်တို့သည်ချန်ခြွင်းမှလူသိများစီစဉ်သူများအဖြစ်အပျက်၏။ ပြန်သွားဖို့အစီအစဉ်။ ရယ်ကျွန်မထင်ပါတယ်။ သူကလက်ထပ်သည်။ သားသမီးသည်တနှစ်နှင့်တစ်နှစ်ခွဲအရွယ်ပါ။ ။ အဘယ်အရာကိုတစ်ဦးကလှပသောဆယ်ကျော်သက်လှပတဲ့မင်းသမီးမေ ၉ နှစ်အရွယ်နှင့်အတူကောင်းတစ်ဦးကိုယ်လိုင်းနဲ့မကောင်းတဲ့အလေ့အကျင့်။ ကြၽန္ေကွာရှင်း၊ဂျက်လေယာဉ်။ ၊အရပ်ရှည်ရှည် ၁၈၃ စင်၊ဒီတော့ကျွန်မအထင်သူဖြစ်လာသည်တစ်ခုအလွန်အရေးတိုးတက်မှုမိတ်ဖက်ငါ့အဘို့၊ကျော် ၁၈ အသက်အနှစ်၊ငါ့အမှုအတွက်မြင့်သည်အရေးကြီးသောကြောင့်ငါ့ကိုအဘို့နှံစာရင္းအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ဖြစ်ပါသည်၊ဒါပေမဲ့သူလည်းမခံစားရပါဘူး၊ဒါကြောင့်သူကအမြဲဆွဲဆောင်မှုနှင့်ထောက်ခံ။ဒါပေမဲ့ဘယ်တော့မှအရှုံးမပေး၊အစဉ်အမြဲစိတ်ရင်းမှန်။ သို့သော်၊မပေးပါနဲ့၊အစဉ်အမြဲစိတ်ရင်းမှန်နဲ့ပွတ်ချစ်ခြင်းမေတ္တာအတွက်၊သင်တစ်ဦးကိတ်မုန့်ဖုတ်။ ၎င်း၏အားနည်းချက်များပါဝင်နှင်းအက်ေစားဆင်ယင်။ ငါသိငါပြောနှင့်အတူကြည့်ရှု။ ။ ငါ ၂၂ နှစ်အရွယ်။ ငါ့သမီး၊၉ လအဖွဲ့၊မူလတန်းကျောင်းဆရာ။ ငါ့အကြိုက်ဆုံးလှုပ်ရှားမှုသည်စာဖတ်ခြင်း တစ်ဦးစာအုပ်။
၊ဒီဟာလည်းဘရာဇီး၊အဘယ်အရာကိုသင့်အဘို့အရှာဖွေနေ၊တစ်ဦးအလေးအနက်ဆက်ဆံရေးရယ်စရာနှင့် ။ အကြှနျုပျ၏အကြိုက်ဆုံးအချိန်အတွက်သတ်မှတ်သည်၊သင်တန်း၏၊ပါတီ။ ရီယိုဒီဂ်ေ-အကြီးမားဆုံးပွဲတော်တွင်ပေါင်းစပ်တံတားနှင့်အတူရောင်စုံပွဲတော်စတိုင်၊အလွန်ကောင်းမွန်သောဝတ်စုံနှင့် ။ အဘယ်ကြောင့်မပြန်ထိုင်ပြီးအနားယူ၊အသစ်တစ်ခုကိုမိတ်ဆွေတစ်ဦးသာယာသောလမ်း၊သို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုနှင့်အတူသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လက်ကမ်းခြေပေါ်။ ဓာများအတွက်မော်ဒန်ဗိသုဘရာဇီး၊ နှင့်ဘရာဇီးရိုးရာအစားအစာ။ ဘယ်အဖြစ်အပျက်။ တစ်လျှောက်လုံးတစ်ခုလုံးကိုခရီးကို၊အမေဇုံတိုက်ရိုက်လွတ်လပ်စွာရှိမရှိသင်၌ဘရာဇီး၊ခရီးသွားလာရန်ဇီးသည်အကောင်းထက်အသစ်တစ်ခု၊တစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။ နေ့တိုင်း၊ထက်ပို ၁၀၀၊၀၀၀ လူတွေတက်ရောက်အ ၊ဘယ်မှာမြဲရှိပါတယ်အများကြီးကိုဘရာဇီးမိန်းကလေးများနဲ့လူမှုရေးများအတွက်ကလေးများနှင့်အသိအကျွမ်း။
ဆာလွဴဒါန္းဆန့်ကျင်ရန်ပုံငွေရုရှားချက်တင်ကစားတဲ့၊လှူဒါန်းမှုများကိုအတူတကွထောင်ပေါင်းများစွာ၏နှင့်အတူဆိုဒ်များကိုအမည်ဝှက်စွာအမည်မသိ ။ အနဲ့အွန်လိုင်းဆက်သွယ်မှုကျပန်းရွေးချယ်ထားသည်။ အခုအချိန်မှထွက်ခွာနိုင် စကားပြောနှင့်ထိတွေ့နှင့်အတူအခြားကျပန်းဖှေ။ အခုအချိန်မှာ၊ အချိန်တစ်ဝက်တစ်သန်းသွားအလာ။ အဆိုပါဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုရုရှား တွင်စတင်ခဲ့ပြီး ၂၀၀၉ လူကြိုက်များရရှိခဲ့နှင့်အတူအထက်တန်းကျောင်းသားများ၊နှင့်ပြီးနောက် ၂၀၁၀ ဆန်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဖြစ်လူသိများနယူးယောက်နှင့်နယူးယောက် ။ ဤသည်အဆင်ပြေတဲ့အတွက်ရှာချက်တင်ရုပ်သံလိုင်း၏ပုံစံအတွက်အကြောင်းစမ်းသပ်မှုစတင်လွှင့်အိမ်မှာပုပ်အခြားလူများ။ ဒါကြောင့်လူတိုင်းအနိုင်အဖြစ်ဖန်တီးရုပ်သံလိုင်းသင်လိုအပ်အဖြစ်၊သူ၏စာအုပ်မှမေ ၉၊၂၀၁၂မှုနှင့်မှတ်ပုံတင်ခြင်းသည့်အတင်ပြရမည်အပေါ်မေ
၁၀၊၂၀၁၂၊ဆိုလိုသည်မှာမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုလုံးဝတားမြစ်။ နောက်ပိုင်း ၂၀၁၂ တွင်ထိုစနစ်၏ငွေပေးချေမှုများအတွက်အရွယ်မရောက်သေး၊ နှင့်၊အရေးအကြီးဆုံးကတော့၊အရင်းအမြစ်များ ၊ယာယီအတည်ပြုမှုငွေပေးချေမှုစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ကုန်ကျစရိတ်၏၁၃၀ အဆင့်အနေဖြင့်ယခင်ကာလအထူး။ အဲ ၊ခံစားမိသူအလောင်းတွေ နှင့် ။ လည်းရုရှားအလှအပ။ မိတ္တူနှင့်ငါးပိအထူးဖန်တီးရင်းအမြစ်ကုဒ်ကိုဒီဇိုင်းဤစာမျက်နှာ၏ထူးခြားသော။ နိုင်ငံအနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနား။ သောသူအပေါင်းတို့သည်အတွက်စုဆောင်းမိလာကစားတဲ့အနိုင်ငံများ၏ပြည်သူများ၏လွတ်လပ်သော။ ဒီအအတိအကျတူညီအမျိုးအစားအားလုံးကိုအသုံးပြုသူများ။ သတၱဳတြင္း ပယ်နှစ်ကြိမ်အဖြစ်အများကြီးအ ။ အသုံးပြုမှုတချို့ကလေးတွေကကဲ့သို့ဘွန်းနှင့်လူမှုရေး။ သူတို့အားလည်းရှိပါတယ်ဖမ်းမိ။ သင်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်ပန်ကာ၊သင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်အများကြီးပိုတဲ့အချက်အလက်အွန်လိုင်း။ ကြယ်ပွင့်စစ်ပွဲများအတွက်ဇာတ်ကောင်။ ဒါကြောင့်ဟန်တစ်ကိုယ်တော်ကြောင့်၊ထို့နောက်သင်ပါလိမ့်မယ်၊မကြာခင်အံ့ကြီးအားပေးပြီးမှအမည်မသိ ပညာရှင်။ ပွဲတော်သြစတြေးလျ-မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်မတ်လ ၂၇၊ကျွန်တော်တို့အဖန်ဖန်အထပ်။ ဆိုက်မႈမ်ားပေါ်သည်ထင်ရှားတယောက်ပြီးတယောက်နှင့်အဆက်အဖြစ်လုပ်ဆောင်ချက်ကြီးပြင်း၊ဒါပေမယ့်လူကြိုက်များနဲ့ဘာမှရှိပါတယ်။ ဒီအာရုံစူးစိုက်ကလစ်နှိပ်မောက်စဒီဟာမမျှော်လင့်ထားပြီးစီးရန်၊ဤရွေ့ကားဆိုက်များများသောအားဖြင့်တားမြစ်၏။ ဤသည်ကိုလည်းအမှု၌တဦးတည်းအပိုင်း၊တောင်အရပ်နှင့်အတူ၊ ကင္မရာအဓိက။.
၆။ အနုံအယူခံအင်တာနက်ကြိုးအတွက်အတင်းအဖြစ်မကြာမီအဖြစ်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်၊ဒါဟာတင်းကြပ်စွာတားမြစ်ပိတ်ပင်။ ၇။ နှောင့်ယှက်သည်၊ညှစ်သည်၊ညှစ်သည်၊စသည်တို့ကို။၊ ကျေးဇူးပြုပြီးတင်အုပ်စုတစ်စုအဖွဲ့ဝင်မှတုန့်ပြန်အတွက်ဘယ်နေရာမှာထိုကဲ့သို့သောလူတားမြစ်ထားပါသည်။ လုံးဝအမည်မသိ။ ၈။ အဖြစ်တိုက်ဖျက်၏ပျက်စီးခြင်းလူငယ္မ်ား၊သတင္းပူျအမှားအယွင်းများ၊ထည့်သွင်းပုံများကိုဆွဲဆောင်ရန်အာရုံစိုက်။ မနက်အားပေး အသံကဲ့သို့တိရိစ္ဆာန်များ။ ငါ့နာမကို ၊၂၉ အသက်အနှစ်။ ငါ ။၊ သာ လိုအတာ္ယာဥ္ ၃၀ အသက်အနှစ်၊အဘယ်သူသည်လက်ထပ်ပြီးခဲ့တဲ့မိသားစု။ ရှိသည်လိမ့်မည်အတားအဆီးကြသည်မဟုတ်ကြောင်းမတူညီသောအကွာအဝေး။ ကျွန်တော်အရေးအသားသင်ဖို့
ဂုဏ်ယူပါတယ်။ ယခုရှိ၏တစ်ဖွဲ့လုံးသစ်ကိုဒေသခံလူထုနှင့်ဤအသစ်အခွင့်အလမ်း:သတင်းလွှာကိုပေးပို့-သတိပေးချက်များကိုအားလုံးလစဉ်သူစုဆောင်းသောစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းနှင့်အခမ်းအနားအတွက်အမိုင်နို။ ဤအသစ်အင်္ဂါရပ်များ:သတင်းလွှာကိုပေးပို့-သတိပေးချက်များကိုအားလုံးလစဉ်သူစုဆောင်းစိတ်ဝင်စားစရာအမိုင်နိုအကြောင်းအရာနှင့်။ အလွယ်စေလွှတ်မည်-ကဲ့သို့သော ပန်ကြား၏အကြံအစည်မည်သို့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည်၊ဒါကြောင့်သာမန်လူတွေမတာဝန်ရှိကြောင်း၏ဖြစ်ရပ်အ နှင့်လူတိုင်းဟာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဝိသေသလက္ခဏာများ၊တွေ့ကြုံ။ အသုံးပြုသူအမည်:လက်စ်မင်္ဂလာပါ။ မနေ့ကတနင်္ဂနွေနေ့မှာ၊ငါလမ်းလျှောက်ဆင်းလှေကားကိုအမြဲဒီဆက်ဆံရေး။ မယ်မေးဖြေဖို့သင်သင်ကိုယ်တိုင်အကြောင်း:အစဉ်မပြတ်ငါသက်သာခံစားရတဲ့အခါကျွန်မအတွက်သင်ဟာကြည့်ရှုပါ"မွန်"၊အဘယ်သူမျှမနေပါစေသင်မည်သို့ဟာသ-မင်္ဂလာပါ၊ငါလမ်းလျှောက်ဖို့မော်စကိုမိတ်ဆွေတစ်ဦးထံမှ၊ချက်တင်၊စသည်တို့ကို။။။∞ဆာဌ∞။ အချိန်ကြာမြင့်စွာအမှတ်တွေ့မြင်။ ကိုယ့်တယ်။ကျွန်တော်အဝါရောင်။ကျေးဇူးပြုပြီးသုံးပြီးကြိုးစားမှ။ ဤဖြစ်ရပ်သည်ဆိုပါက၊ထို့နောက်မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်။ ငါချင်ပါတယ်ခုတ်ဖို့ငါ့မိတ်ဆွေ'ဆံပင်၊ဆံပင်ညှပ်ရတဲ့အ၊သို့မဟုတ်အရာတစ်ခုခုကို။.
ဟိုမှာ၊ငါသည်အလိုအားပေးတုံ့ပြန်ချက်နှင့်အသင်သည်အဘယ်သို့ပြုနိုင်သည်နှင့်အတူသစ်ကိုမိတ်ဆွေများနှင့်အသိအကျွမ်းတရုတ်နိုင်ငံအတွက်ချက်ချင်းကြွရိုက်။ သင်ရှိမရှိအတွက်အလုပ်လုပ်အသိုင်းအဝိုင်းသို့မဟုတ်မိတ်ဆွေများဖြစ်စေ၊အစိတ်အပိုင်းအတွက်ဓာတ်ပုံအယ်လ်ဘမ်ကိုဆွေးနွေးဖြစ်တက်ကြွစွာ။ ဖြစ်နိုင်လျှင်၊အလောင်း နှင့်အချို့သောအချိန်နွေရာသီအတွက်ဆန့်ကျင်တရုတ်အစိုးရကိုလိုက်လျောညီထွေအတွက်ပူပြင်းတဲ့ရာသီဥတု၊အကယ်တရုတ်အစိုးရစတင်လက်ထရောနစ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသုတေသနမှတ်တမ်းများမတတ်နိုင်မှယခုနွေရာသီအတွက်ကြောင့်ကြောက်မက်ဘွယ်သောအကျိုးဆက်တွေရှိပါတယ်။
၁၈ ဗီဒီယိုများ ချက်တင်ကစားတဲ့မိန်းကလေးအခမဲ့မှတ်ပုံတင်ခြင်းမရှိပါ ဗီဒီယိုဆက်သွယ်ရေးမိတ်ဆက် ဗီဒီယိုချိန်းတွေ့နှင့်အတူမိန်းကလေးငယ်များအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာအနှံ့ ချက်တင်ကစားတဲ့အွန်လိုင်းနှင့်အတူမိန်းကလေးများ ဆှဗီဒီယိုစကားပြောခန်းစုံတွဲများအဘို့ ဗီဒီယိုစကားပြောမပါဘဲမှတ်ပုံတင်ခြင်းမရှိပါ။ ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များများအတွက်အလေးအနက်ဆက်ဆံရေး ချိန်းတွေ့ဆိုက်အခမဲ့မှတ်ပုံတင်ခြင်း လိင်နှင့်ချိန်းတွေ့မှတ်ပုံတင်ခြင်း